Internet Explorer Weli waa Furaha ugu sareeya ee Eegashada Emailka
Jimce, Maarso 8, 2013 Douglas Karr
Dadka ku xeel dheer Litmus waxay sii daayeen xogtan, Internet Explorer weli waa xulashada ugu sareysa e-maylka ku saleysan Web-ka. Waxaan u maleynayaa in marwalba ay layaab nagu noqoto kuweena ku jira warshadaha qadka - kuwaas oo u janjeera dhanka Chrome iyo Safari, laakiin waxaan inta badan indhaha ka qabsanaa cidda ay yihiin macaamiisheenu iyo jawiga shirkadaha ay ku sugan yihiin. iyada oo aan la helin fursado badan. Emailka iyo isticmaaleyaasha websaydhka adduunka oo dhan waxay marin u heli karaan in badan
Khamiista, Diseembar 4, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan u maleynayaa inaan si quruxsan u halaagay waqtiyadii la soo dhaafay markay tahay waaxaha IT-ga. Waxaan ku shaqeynayay shabakad shaqadaydii ugu horreysay waxaanan ahaa ninka leh dhammaan alaabada ay ku ciyaaraan waaxdu (marka laga reebo Agaasimahayga waqtigaas, marwalba mid baan u iibiyaa isaga marka hore). U guuritaanka shaqooyinka kala duwan ee Suuqgeynta iyo Teknolojiyada ayaa i dhigtay labada dhinac ee albaabka IT-da sidaa darteed waxaan ogahay sida niyad jabku uusan aheyn
U fiirsashada saamiga suuqa ee dhawaanta ee daalacashada ayaa bixinaya xoogaa aragti ah oo ku saabsan cidda guuleysata iyo ku guuleysiga dagaallada. Firefox waxay kusii socotaa xawaare, Safari kor ayey u sii gurguuraysaa, Internet Explorer-na wey lumineysaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan kaga faaloodo sedexda 'aragtiyahayga' waxa dhacaya. Internet Explorer Kadib burburinta Netscape Navigator, IE runtii wuxuu noqday heerka dahabka ee shabaqa. Browser-ku wuxuu ahaa mid fudud, shaqeynaya, horeyna loogu rakibo dhammaan alaabada Microsoft.